A na-atụ anya njem Ekele ga-eru ndị njem nde abụọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » A na-atụ anya njem Ekele ga-eru ndị njem nde abụọ
Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Jikere maka njem ekele
Ndị nlekọta nchekwa ụgbọ njem United States (TSA) nyochara ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị njem n'otu ụbọchị n'izu gara aga kemgbe ọrịa ahụ malitere. Ha na-atụ anya oge njem Ekele na-ekwo ekwo, nke a na-atụle site na Nọvemba 19 ruo Nọvemba 28.
TSA kọrọ na ha nwere ndị ọrụ zuru oke iji na-elekọta ndị njem nde 20 a na-atụ anya ya ga-esi na ebe nlele nchekwa ha n'oge oge njem a kapịrị ọnụ. Ụbọchị njem kachasị elu na akụkọ ntolite TSA bụ ụbọchị Sọnde ka Ekele gachara na 2019 tupu ọrịa ahụ. N'ime oge ahụ, ndị ọrụ TSA nyochara ndị njem nde 2.9.
Ụbọchị kacha arụ ọrụ nke ọma Njem ekele bụ Tuesday na Wednesday tupu Ekele na Thursday na Sunday mgbe Ekele .
Onye nchịkwa TSA David Pekoske kwuru, sị: "Anyị na-atụ anya na njem nwere ike ịbịaru nso na ọkwa ọrịa na-efe efe nke ezumike a, anyị na-arụkwa ọrụ na njikere maka ndị njem ezumike. Anyị etinyela teknụzụ na-eme ka ike nchọpụta dịkwuo elu ma belata mmetụ anụ ahụ, ọ dịkwa mkpa ka ndị njem jikere atụmatụ njem maka ahụmịhe nleba anya kacha dị mma. Site na ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'ozuzu na-akawanye mba na ntụkwasị obi ka ukwuu na njem ahụike, a ga-enwekwu ndị mmadụ na-eme njem wee mee atụmatụ n'ihu, mụrụ anya ma na-eme omume ọma.
"Ana m akwado ka ndị njem na-aṅa ntị na nduzi nke ndị ọrụ TSA na-enye n'ebe nlele. Ha nwere ike na-eduzi gị n'ahịrị dị mkpụmkpụ ma ọ bụ na-eduzi gị gburugburu onye na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga. Ha nwekwara ike na-enye gị ndụmọdụ ga-ebelata ohere ị ga-achọ ka ọ gbadaa.”
TSA na-atụ aro ka ndị njem na-ewepụta oge maka njem ezumike wee rute n'oge karịa ka ọ dị na mbụ. Ha na-enyekwa ndụmọdụ ndị a:
Yiri ihe nkpuchi
Ndị njem, ndị ọrụ TSA, na ndị ọrụ ụgbọ elu ndị ọzọ ka achọrọ iyi ihe mkpuchi dịka iwu mkpuchi mkpuchi gọọmentị nyere. Onye ọ bụla nọ n'ọdụ ụgbọ elu, bọs na ọdụ ụgbọ oloko, nọ n'ụgbọelu ndị njem, ụgbọ njem ọha, okporo ụzọ ndị njem, na bọs ndị na-agafe n'okporo ụzọ na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ edobere anya ga-eyi ihe mkpuchi. Ọ bụrụ na onye njem ebuteghị ihe nkpuchi, onye ọrụ TSA ga-enye onye ahụ ihe mkpuchi n'ebe a na-enyocha ya.
Kwadebe maka nchekwa mgbe ị na-ebukọ ma hụ na ọ nweghị ihe amachibidoro n'ime akpa. Mara nri ndị kwesịrị ịbanye n'ime akpa enyochara. Anụ anụ, kranberị ihendori, mmanya, jam na ihe nchekwa kwesịrị ịbanye n'ime akpa a na-enyocha, n'ihi na ha abụghị ihe siri ike. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịwụfu ya, fesa ya, gbasaa ya, gbanye ya ma ọ bụ wụsa ya, mgbe ahụ ọ bụghị ihe siri ike ma ekwesịrị ịkwanye ya na akpa a na-enyocha. Dị ka mgbe niile, ndị njem nwere ike weta nri siri ike dị ka achịcha na ihe ndị ọzọ esiri esi n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọ dị mma iweta hand sanitizer. TSA na-ahapụ ndị njem ugbu a ka ha bute otu akpa mmiri mmiri ihe dị ka ounces 12 maka onye njem n'ime akpa ebu ruo mgbe amara ọzọ. Ndị njem nwere ike ịtụ anya na a ga-enyocha akpa niile buru ibu 3.4 ounces iche, nke ga-agbakwunye oge na ahụmịhe nlele ha. A na-ahapụkwa ndị njem ka ha bute ihe mkpochapụ mmanya na-egbu egbu ma ọ bụ ihe mkpochapụ nje na-ebu, akpa elebara, ma ọ bụ ha abụọ.
Debanye aha ma ọ bụ megharịa otu TSA PreCheck® gị
Ndị nwetara TSA PreCheck afọ ise gara aga na-enwe ike imeghari otu ha n'ịntanetị na mbelata ego. Ndị na-enweghị TSA PreCheck kwesịrị ịdebanye aha ugbu a iji nweta uru TSA PreCheck, dị na ọdụ ụgbọ elu 200 US. Ndị njem debanyere aha na mmemme njem ntụkwasị obi, dị ka TSA PreCheck, adịghị mkpa iwepu akpụkpọ ụkwụ, laptọọpụ, mmiri mmiri, eriri na jaket ọkụ. Ndị otu TSA PreCheck bara uru ugbu a karịa ka ọ dị na mbụ n'ihi na ọ na-ebelata akara aka n'oge ọrịa na-efe efe ma na-etinye ndị njem n'ahịrị nchekwa nke nwere ndị njem ole na ole ma na-aga ngwa ngwa, nke na-akwado ndọpụ uche ọha. Iji chọta mmemme njem ntụkwasị obi nke dabara maka mkpa njem gị, jiri ngwaọrụ ntụnyere ndị njem tụkwasịrị obi DHS.
Rịọ nkwado ndị njem
Ndị njem ma ọ bụ ezinụlọ nke ndị njem nwere nkwarụ na / ma ọ bụ ọnọdụ ahụike nwere ike ịkpọ TSA Cares helpline free na 855-787-2227 ọ dịkarịa ala awa 72 tupu ị na-efe efe na ajụjụ ọ bụla gbasara iwu nyocha, usoro na ịchọpụta ihe ị ga-atụ anya na ya. ebe nchekwa. TSA Cares na-ahazikwa enyemaka na ebe nlele.
Zaa ajụjụ gị tupu ị gawa ọdụ ụgbọ elu
Jụọ TSA. Ndị njem nwere ike nweta enyemaka ozugbo site n'itinye ajụjụ ha na nkọwa ha na @AskTSA na Twitter ma ọ bụ Facebook Messenger. Ndị njem nwekwara ike iru ebe kọntaktị TSA na 866-289-9673. Ndị ọrụ dị site n'elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere iri na otu n'ụbọchị izuụka yana elekere itoolu ruo elekere asatọ nke abalị na ngwụcha izu/ụbọchị ezumike; na ọrụ akpaghị aka dị awa 8 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu.
Gbaa mbọ hụ na ị nwere ID kwesịrị ekwesị
Tupu ha aga n'ọdụ ụgbọ elu, ndị njem kwesịrị ijide n'aka na ha nwere njirimara anabatara. Nnwale njirimara bụ nzọụkwụ dị mkpa na usoro nyocha nchekwa.
Dịka ihe ncheta, mmata ọha bụ isi maka ịkwado mbọ nchekwa TSA. A na-agba ndị njem ume ka ha kọọ ihe omume na-enyo enyo, ma cheta: Ọ bụrụ na Ị Hụrụ Ihe, Kwuo Something™.